Ozil oo ugu dambeyn Afka furtay isagoona si aan Gambasho lahayn u Caddeeyay SABABTA uu ula kulmay Madaxwaynaha Turkiga Erdogan – Gool FM
(Europe) 22 Luulyo 2018. Mesut Ozil ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha Caalamiga ah isagoona sheegay inuu dareemayo in la isir Faqooqay isla markaana la xushmad darreeyay.
Laacibka Arsenal ayaa sidoo kale si aan Gambasho lahayn daaha uga rogay sababatii uu ula Kulmay Madaxwaynaha dalka uu Asala ahaanta ka soo jeedo ee Turkiga Erdogan.
Ozil ayaa soo qoray Warqadan dheer:
“Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan helay waqti aan kaga fikiro wixii dhacay bilihii la soo dhaafay, si joogto ah, waxaan doonayaa in aan dareenkayga idinla wadaago oo ku saabsan wixii dhacay. sida dad badan oo anigoo kale ah, waxay ka soo jeedaan wax ka badan hal waddan, waxaan ku bar baaray Jarmalka, qoyskaygana waxay asal ahaan ka soo jeedaan Turkiga.
‘Waxaan leeyahay laba qalbi, mid Jarmal ah iyo mid Turkish ah, caruurnimadeydii hooyadey waxay mar walba i bari jirtay in aan noqdo mid ixtiraam leh oo aan illoobin halka aan ka soo jeedo, kuwaasina waa qiimaha aan ku dhaqmo illaa maanta. Bishii May, waxaan Madaxweyne Erdogan kula kulmay London, isagoo ka qayb qaadanayay barnaamij taakuleyn iyo waxbarasho. Markii ugu horreysayna waxaan kulannay 2010 kaddib markii isaga iyo Angela Merkel ay wada jir Berlin ugu daawadeen ciyaartii Jarmalka iyo Turkiga.
‘Wixii waqtigaa ka dambeeyay, sheekadeennu waxay ku faaftay dunida dacalladeeda, waxaan ka war hayaa in sawirkii aan wada galnay Erdoan uu Saxaafadda Jarmalku si weyn uga fal celisay, waxaana dadka qaar ay in aan ahay beenaale aan daacad ahayn, sawirkii aan wada galnay wax hadaf siyaaasdeed ah loolama jeedin. Sida aan horey u sheegay hooyadeey marnaba ma ogoleyn in aan lumiyo halkaan ka soo jeedo, hiddaha iyo dhaqanka qoyskayga. Aniga ahaan inaan sawir la galo Madaxweyne Erdogan ma aysan ahayn arrimo siyaasadeed iyo doorasho toona, waxay ku saabsanayd anigoo ixtiraamaya ninka ku fadhiya kursiga ugu sarreeya ee dalka ay ka soo jeedaan qoyskeyga.
‘Shaqadeydu waa ciyaartooy kubadda cagta dheela, mana ihi siyaasi, kulankeennuna ma ahayn mid taageero siyaaseed lagu doonayo, dhab ahaantii waxaan ka wada hadalnay mowduuca aan mar walba markaan kulanno ka sheekeysanno –Kubadda cagta– maadaama isaga xitaa dhallinyaronimadiisii uu ahaa ciyaartooy, inkastoo saxaafadda Jarmalku ay arrinta u tustay dhinac kale oo ka duwan, xaqiiqdu waxay tahay in kulanka aan la yeesha Erdogan uusan sharaf darro u soo jiideynin ab iyo isirkayga, kuwaasoo aan ogahay in ay ku faanayaan heerka aan taaganahay maanta.
‘Aniga ahaan, wax dhibaato ah uma arko cidda Madaxweynaha ahayd, waxaan macno u arkaa in uu ahaa Madaxweynaha, in la xushmeeyo Madaxweynaha dal xukumaya waa fikir aan hubo in ay ila wadaagaan Boqorradda iyo Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska Theresa May marka ay labaduba Erdogan ku marti geliyeen London. Hadday ahaan lahayd Turki ama Madaxweynaha Jarmalka, ficilladeyduna waxba kama duwanayn kuwaas, waxaan dareemayaa in ay taasi adag tahay in la fahmo, marka la eego inta badan dhaqammada hoggaamiyeyaasha siyaasadda suurtogal ma ahan in loo arko inay ka duwan yihiin dadka caadiga ah, laakiin xaaladdan oo kale way ka duwan tahay, natiijo kasta ha ka soo baxda doorashadii la soo dhaafay iyo kuwii ka sii horreeyayba weli waan ku dhiirran lahaa inaan la galo sawirkan”.
Alison Becker oo ka warbixiyay sirta ka dambeysa inuu ogolaado dalabka kooxda Liverpool
Gianfranco Zola oo ka dalbaday jamaahiirta kooxda Chelsea inay u sabraan Maurizio Sarri